Teraka andro vitsy taorian’i Meghan Markle ilay vehivavy nitondra ny zanak’i Kim Kardashian sy Kanye West faha-efatra.
Kobe Bryant sy Gianna : efa voalevina
Nodimandry ny 26 janoary lasa teo ilay mpanao basikety Kobe Bryant sy ny zanany vavy Gianna.
Colin Firth, Audrey Hepburn…Mahay miteny fiteny maro hafa
Mamiratra ireo olo-malaza rehefa manitsaka karipetra mena. Ankoatra izany nefa dia maro amin’izy ireo no miezaka, eo amin’ny fiainany manokana mba hisongadina. Takian’ny horonan-tsary lalaoviny sy ny fifandraisana hananany eo amin’io tontolon’ny sarimihetsika io rahateo izany matetika. Ireto ary ireo olo-malaza mahay fiteny maro hafa noho ny azy na « polyglottes ».
Eminem : Tsy nampoizin’ny maro ny fiakarany an-tsehatra tamin’ny Oscars
Fotoana nanamarika ny fanolorana amboara nandritra ny Oscars 2020 ny faran’ny herinandro lasa teo ny fiakaran’i Eminem an-tsehatra. Nandeha teo amin’ny fahitalavitra lehibe ny fanolorana ireo horonan-tsary voafidy nahitana an’i Rocky III,
Hailey Bieber : nisedra olana tamin’ny fiandohan’ny mariaziny
Tsy mora ho an’i Hailay Baldwin ny niaina ny iray volana voalohan’ny tokantranony, miaraka amin’i Justin Bieber. Marary mantsy ity farany, voan’ilay aretina antsoina hoe :
Ryan Gosling, Julia Roberts… : mahay manafina ny fiainany manokana
Tsy afa-bela ireo olo-malaza any am-pita any fa voazara any anaty tambazotra sosialy sy any anaty haino vaky jery any avokoa ny kipitsony rehetra amin’ny fiainany, na ny madinika indrindra aza.
Madonna, tara lava : Mitory azy ireo mpankafy
Taorian’ireo mpankafy azy tao Miami dia ireo ao New York indray no mitory an’i Madonna. Noho ny fahatarany matetika miverina foana no anton’izany.
Charlize Théron : nandaniana 4 volana ny fanamboarana ny akanjony
Ity akanjo tohitena ity no nanaovan’ilay mpilalao sarimihetsika, Charlize Théron nandritra ilay lanonana CDGA Awards notanterahina tao Los Angeles, ny 28 janoary lasa teo.
Zanak’izy ireo faharoa nampitondraina vehivavy hafa moa ity zazalahy ity, teraka ny zoma lasa teo.
Arakan y filazan’i Kim Kardashian dia mitovy be amin’i Chicago, ilay zanany lahy farany izy ity, izay mety mbola hiova endrika ao aoriana ao. Mbola tsy nilaza ny anaran’ilay zaza mo aizy ireo, raha fantatra fa Archie kosa no anarana nomen’i Meghan Markle sy ny printsy Harry ilay zanak’izy ireo lahy voalohany.